Filimaan la daawado ka hor intaadan aadin Rome si aad u barato magaalada | Wararka Safarka
Luis Martinez | | dhaqanka, General, Italia
Haddii aad qorsheyneyso safarkaaga Talyaaniga, inta udhaxeysa dhamaan magaalooyinka aad booqan karto ee wadanka, Rome waxay u badan tahay inay tahay joogsi qasab ah oo ku saabsan wadadaada. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Rome, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan kuu tilmaanno ayaa ah Magaalada Daa'im kaqeybgal balaaran aduunka shineemo. Tanina waxay ku jirtaa cajalado labadaba asal ahaan iyo qaabeynteeda hadda.
Ku saabsan tii hore, xitaa waxaa jiray nooc filim oo dhan ah oo dib u soo celiya Rome-tii hore: peplum-ka. Iyo, sida tan labaad, laga bilaabo Neorealism Talyaani ah warshadaha ee Hollywood doortay caasimada Italia sida goobta loogu talagalay inbadan oo filimadiisa ah. Laakiin, adigoon ku sii dheerayn, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah filimada si aad u daawato ka hor intaadan aadin Rome.
1 Filimmada la daawado ka hor intaadan aadin Rome: laga bilaabo peplum ilaa filimka maanta
1.1 'Ben Xur'
1.2 'Ciidaha Rome'
1.3 'La dolce vita', oo ah sheeko kale oo ka mid ah filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Rome
1.4 'Xusuus-qor qaali ah'
1.5 'Rome, magaalada furan'
1.6 'Maalin gaar ah'
1.7 'Rome jacayl'
1.8 'Quruxda weyn'
1.9 'Accatone', sawir ka mid ah xaafadaha magaalada
Filimmada la daawado ka hor intaadan aadin Rome: laga bilaabo peplum ilaa filimka maanta
Sidaan kuu sheegnay, filimada ay tahay inaad aragto kahor intaadan aadin Rome waxay magaalada uqaadayaan goob. Laakiin, marka lagu daro, in badan oo iyaga ka mid ah ayaa sameeya hal dabeecad kale taasi oo saameyn ku leh xitaa go'aamisa nolosha halyeeyada. Waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah filimaan.
Haddii aan ka hadleyno nooca filimada ee loo yaqaan 'peplum', Hollywood-ka weyn waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu wanaagsan. Waxaa isku dubariday William Wyler oo jilaya Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack hawkins y Haya Harareet, wuxuu ku saleysan yahay sheeko xarago leh by Lewis wallace.
Filimku wuxuu ka bilaabmayaa Yahuudiya sanadka XNUMX ee xilligeenna. Aristocrat Judá Ben-Hur waxaa si xaqdaro ah loogu eedeeyey inuu mucaarad ku ahaa reer Rooma waxaana lagu xukumay galley. Markii uu la kulmay Ciise Masiix ka dib oo uu soo maray dhibaatooyin badan, halyeeygii ayaa yimid Rome wuxuu isu beddelay nin taajir ah oo la tartamaya tartamada gaadhifaraska. Laakiin isagu wuxuu leeyahay hal ujeedo oo keliya: inuu ka aargudo saaxiibkiisii ​​hore ee Mesala, oo mas'uul ka ahaa xariga hooyadiis iyo walaashiis.
'Ben-Huur' wuxuu lahaa miisaaniyad shan iyo toban milyan oo doolar ah, oo ah tan ugu weyn ee filim illaa xilligaas. In ka badan laba boqol oo shaqaale ah ayaa ka shaqeeyay dhismaha qurxinteeda, oo ay ku jireen boqolaal taallooyin iyo frises. Sidoo kale, boqol gabdhood oo dhar tollan ah ayaa masuul ka ahaa abuurista dharka. Y goobta tartanka gawaarida Waa mid kamid ah kuwa ugu caansan taariikhda shineemooyinka.
Filimkan wuxuu ka furmay magaalada New York bishii Nofeembar 18, 1959 wuxuuna noqday filimka labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay ilaa iyo haatan kadib 'Gone with the Wind'. Sidii oo kale taasi kuma filnayn, wuu helay kow iyo toban Oscar, oo ay ku jiraan Sawirka ugu Fiican, Agaasimaha Ugu Fiican, iyo Jilaaga Ugu Fiican. Si kastaba xaalku ha ahaadee, weli waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan taariikhda shineemooyinka.
Plaza de España, halkaas oo mid ka mid ah muuqaallada ugu caansan ee 'Ciidaha Roman' laga duubay
Cajalad kale oo uu agaasimey William WylerIn kasta oo leh mowduuc aad u kala duwan, haddana sidoo kale waa mid ka mid ah filimada la arko ka hor intaadan aadin Rome. Xaaladdan oo kale, waa riwaayad jaceyl oo jilitaan leh Audrey Hepburn y Gregory Peck. Midka koowaad waa Anna, amiirad ka dib markii ay ka soo baxsatay dadkii la socday, maalin iyo habeenna magaalada ku dhex joogta sida qof kasta oo Roomaan ah.
Waxaa lagu toogtay istuudiyaha caanka ah ee Cinecittá, oo aad ugu dhow caasimada Talyaaniga lafteeda. Waxaa loo magacaabay toddobada abaalmarin ee Akadeemiyadda, waxay ku guuleysatay seddex oo ay ku jiraan Aktarada ugu fiican Audrey ee aan la ilaawi karin. Sidoo kale, muuqaalada sida kan leh labada jilaa ee jaranjarooyinka Fagaaraha Spain ama safarkii mootada ayaa ku qornaa taariikhda filimka.
'La dolce vita', oo ah sheeko kale oo ka mid ah filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Rome
Muuqaalka ugu caansan 'La dolce vita'
Waxaa qoray oo hagaya Federico Fellini sanadkii 1960, sidoo kale waxaa si wada jir ah loogu sacbiyay mid ka mid ah baraha taariikhda filimada. Waxay ka soo muuqatay Bandhig Faneedkii Cannes sanadkaas waana la siiyay Timir dahab ah, in kasta oo uu nasiibku ku yaraa Oscar-ka maaddaama uu kaliya helay midka leh naqshadaynta dharka ugu fiican.
Halyeeyaasheeda waa Marcelo mastroianni, Anita Ekberg y Anouk Aimée. Goobtu waxay sheegaysaa dhowr sheekooyin madaxbannaan oo xiriirkoodu guud yahay magaalada Rome lafteeda iyo hareeraheeda. Sidoo kale kiiskan waxaad aqoonsan doontaa muuqaal aan la ilaawi karin: kan labada geesiyaal ah ee ku maydhanaya Trevi Fountain.
'Xusuus-qor qaali ah'
Nanni Moretti, agaasimaha 'wargeyska qaaliga ah'
Filim taariikh nololeed kaas oo agaasimahiisa iyo jilaayaasheeda, Nani moretti, wuxuu ka warramayaa wixii uu kala soo kulmay Magaalada Aakhiro. Waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo madaxbannaan waxayna isku daraysaa majaajillo iyo dokumentari. Waxaa la sii daayay 1993 oo, sanadkii ku xigay, waxay heshay Timir dahab ah Cannes iyo waliba abaalmarinta agaasimaha ugu fiican.
Si aad ah loo yaqaan ayaa ah muuqaalada uu halyeeygu ku safrayo magaalada gadaashiisa Vespa isagoo sharaxaya sababaha uu u jecel yahay xaafadaha sida Buundada Flaminio o Garbatella. Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad ku saabsan meelaha yar yar ee bartamaha Rome, waxaan kugula talineynaa inaad daawato filimkan.
'Rome, magaalada furan'
Muuqaal ka socda 'Rome, magaalada furan'
Nooc yar oo naxariis yar ayaa leh filimkan Roberto Rosellini oo la soo saaray sanadkii 1945. Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo la dejiyey, wuxuu sheegayaa dhowr sheeko oo jilayaaldooda ay ku xiran yihiin iska caabinta Naasiyiinta.
Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah jilayaasha muhiimka ah waa wadaadka aabe Pietro, kaasoo ku dambeeya in ay toogtaan Jarmalku waana nuqul kamid ah Luigi morosini, wadaad gacan ka geystey iska caabinta lana jirdiley oo loo diley.
Sidoo kale, doorka Pina, naag lagu ciyaaray Ana Magnani. Tan waxaa weheliya, jilayaashu waa Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist iyo Giovanna Galletti. Waa cajalad ceyriin ah oo xitaa ay la xiriirtay faafreeb. Beddelkeeda, waxay heshay Timir dahab ah xafladda Filimka Cannes.
'Maalin gaar ah'
Marcelo Mastroianni, xiddigta 'Maalin gaar ah' oo uu weheliyo Sofía Loren
Marcello Mastroianni y Sophia Loren Waxay ka wada shaqeeyeen dhowr filim, laakiin kani waa midka ugu fiican. Waxaa la dejiyay XNUMX-meeyadii, markii uu faashiistu si xawli ah u socday, waxayna ka dhigan tahay sawir muhiim ah bulshada Talyaaniga xilligaa.
Mastroianni wuxuu ciyaaraa idaacad raadiyaha loo eryay khaniisnimadiisa iyo Loren oo ciyaareysa haweeney uu qabo sarkaal dowladeed Labaduba waxay galaan xiriir markii ay ku kulmaan si kadis ah maxaa yeelay midkoodna kama uusan soo qeyb galin xafladii lagu maamuusayay Hitler May 1938, XNUMX.
Agaasimaha filimka ayaa ahaa Ettore Scola, oo waliba iska kaashaday qoraalka. Xiisad ahaan, wuxuu ku ciyaaraa doorka taageerada filimka Alessandra mussolini, ayeeyo u tahay kalidii taliyihii faashiistaha ahaa. Si ballaadhan ayaa loo abaalmariyay, waxay kasbatay laba magacaabis Oscar: jilaa ugu fiican iyo filimka ugu fiican afafka qalaad, in kasta oo ugu dambayntii aanu midna ku guuleysan.
Roberto Benigni, oo ka mid ah halyeeyada 'A Roma con amor'
Dhawaan waa filimkan oo uu Director ka yahay Woody Allen, sidii loo sii daayay sanadkii 2012. Waa majaajillo jacayl ah oo ka sheekaynaysa afar sheeko oo dhammaantood leh Magaalada Daa'imad ah oo lagu dejinayo waxayna udub dhexaad u tahay dulucda shakhsi ahaaneed iyo caan. Mid ka mid ah halyeeyada, soosaare muusig magaciisu yahay Jerry, waxaa jilay Allen laftiisa.
Kuwa kale waa Jack, arday naqshad dhismeedka ciyaara Jesse Eisenberg; Leopoldo, oo ah nin aan la aqoon oo si lama filaan ah u noqda diiradda warbaahinta oo xardhan Roberto Benigni, iyo Antonio, door uu ciyaaro Alessandro tiberi. Iyaga oo ay weheliyaan Penelope Cruz, Fabio Armilato, Antonio Albanese iyo Ornella Muti.
Toni Servillo, oo ah xiddigga 'The quruxda weyn'
Casriyeyn kii hore, maadaama la sii daayay sanadkii 2013, waa filimkan uu Director ka yahay Paolo Sorrentino, oo isaguna qoraalkan garab istaagay Umberto Contarello. Oo weliba waxay leedahay bar tilmaam.
Rome oo ay burburiyeen ferragosto, saxafiga iyo qoraa jahwareersan Jep Gambardella Waxay la xiriirtaa astaamo wakiillo kala duwan oo ka mid ah qaybaha bulshada sare. Wadaadka, siyaasiyiinta, dambiilayaal cadcad, jilayaal iyo shaqsiyaad kale ayaa sameeya qorshahan oo ka dhaca daaraha dhaadheer iyo villa qurux badan
Xiddigaha filimka Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, iyo turjubaano kale. Sanadkii 2013 ayaa la gudoonsiiyay Timir dahab ah Cannes iyo, wax yar kadib, iyada oo leh Óscar filimka ugu fiican afafka qalaad. Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay tahay casriyeynta qorshaha 'La dolce vita', oo aan horey kaaga soo sheegnay.
'Accatone', sawir ka mid ah xaafadaha magaalada
Pier Paolo Pasolini, agaasimaha 'Accatone'
Liiskan aflaamta ah ee la arko ka hor intaadan aadin Rome ma seegi karo mid uu soo wado Pier Paolo Pasolini, mid ka mid ah indheer garadkii sida wanaagsan u garanayey sida loo qabsado nuxurka Magaalada Aakhiro, waa run in lagu shaandheeyey aragtidiisa gaarka ah.
Waxaan kuu sheegi karnaa wax badan oo cajalado ah, laakiin midkaan ayaan u dooranay maxaa yeelay waa sawir ka baxsan Rome. Accatone waa pimp ka yimid xaafadaha magaalada oo aan joojinayn gaajada, sida kooxda asxaabtiisa ah. Awood u leh inuu wax sameeyo kahor shaqada, wuxuu kusii wadaa inuu sheego oo uu helo dumar cusub oo looga faa'iideysto.
Sida aad ka aragto dhagarta, waa sawir naxariisdarro ah oo ka mid ah hoosta Roomaanka ee kontomeeyadii qarnigii la soo dhaafay. Ka cab Neorealism Talyaani ah waxaana tarjumay Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi turjubaano kale. Xiiso ahaan, waxaan kuu sheegi doonaa taas Bernardo Bertolucci wuxuu ka shaqeeyey kaaliyaha agaasimaha filimka.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Rome. Iyagu waa qayb wakiil ka ah dhammaan kuwa leh Magaalada Aakhiro sida masrax ama xitaa hal halyeey oo dheeraad ah. Xaqiiqdii, waan sheegi karnaa kuwa kale sida 'Malaa'igta iyo Jinniga'waxaa qoray Gregory Widen; 'Habeenada Cabiria'waxaa qoray Federico Fellini; 'Qurxinta'waxaa qoray Luchino Visconti ama 'Cun Jacaylka Tukada'waxaa qoray Ryan Murphy.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 9 filim oo la daawado ka hor intaadan aadin Rome